Xildhibaanadii ugu Dambeeyay ee kamid Noqonaya Aqalka sare oo Goordhaw lagu doortay Muqdisho - iftineducation.com
Xildhibaanadii ugu Dambeeyay ee kamid Noqonaya Aqalka sare oo Goordhaw lagu doortay Muqdisho
aadan21 / February 8, 2017
iftineducation.com – Waxaa goordhaw magaalada Muqdisho lagu doortay Xildhibaanadii ugu dambeeyay ee kamid noqonaya Aqalka sare ee Baarlamanaka Soomaaliya gaar ahaan kuwa ku matalaya Aqalka sare gobolada Waqooyi.
Xildhibaanada maanta la doortay ayaa kala ah Bilaal Idriis Cabdulaahi iyo Siciid Cabdi Xuseen , labadan Xildhibaan ee maanta kamid noqday Aqalka sare ayaa ka guuleestay musharaxiin kale oo la tartamayay.
Guddiga doorashada Heer Federaal ayaa sheegay in maanta lasoo dhameestiray Xildhibaanada kamid noqonaya Aqalka sare, waxaana labadan Xildhibaan ee maanta la doortay buuxinayaan tirada Xildhibaanada Aqalka sare ee gaaraya 54-Mudane.
Xildhibaanada Labada Aqal ee lagu soo doortay magaalooyin kala duwan oo dalka kuyaala ayaa beri waxa ay dooranaan Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya hogaamin doonta afarta sano ee soo socota.
War Deg Deg Ah: Mid kamid ah Musharaxiinta Madaxweyne oo goordhaw tanaasulay (Waa Kuma)
Wararkii Ugu Dambeeyay Ololaha Doorashada ee ka socda Muqdisho iyo Musharaxiinta qaar oo bilaabay in ay…